Mgbe ndị na-ese ihe nkiri na ndị na-ese foto sere onyinyo ikpeazụ ha, a naghị arụ ọrụ nke ọma iji belata nha faịlụ. Mkpokọta eserese nwere ike belata nha faịlụ nke onyonyo - ọbụlagodi 90% - na-enweghị ibelata ogo na anya. Mbelata nha faịlụ nke onyonyo nwere ike inwe ọtụtụ uru:
Oge Ibu Ibu Ngwa - Ibufe otu peeji ngwa ngwa amarala na ị ga-enye ahụmịhe kachasị maka ndị ọrụ gị ebe ha agaghị ada mbà ma ga-etinye aka na saịtị gị ogologo oge.
Idebe Igbe Dị Mma Ka Mma - Ọ bụrụ n’ị na-enye nnukwu onyonyo site na saịtị gị n’ime email gị, ọ nwere ike ịkwaga gị na folda junk karịa igbe igbe.
N'agbanyeghị onye ahịa, ana m agbakọ ma bulie ihe oyiyi ha elu ma hụ mmelite na ọsọ peeji ha, ogo, oge na saịtị, na ọnụego mgbanwe. Ọ bụ n’ezie otu n’ime ụzọ kachasị mfe iji mee ka njikarịcha na ọ nwere oke nloghachi na itinye ego.
họrọ nnukwu ihe oyiyi - ọtụtụ mmadụ na-elelị mmetụta nke nnukwu onyonyo iji gafee ozi… ma ọ bụ ihe infographic (dị ka isiokwu a), eserese, na-akọ akụkọ, wdg.
njikọ ihe onyonyo gị - ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike itinye ihe oyiyi na-eju m anya mana hapụ njikọ nke enwere ike iji chụpụ ndị ọzọ gaa na peeji ọdịda ma ọ bụ oku oku na-aga.
Ihe omuma a zuru oke site na weebụsaịtịBuilderExpert, Ntuziaka Ndọtị Ihe Nlekọta Weebụsaịtị, na-agagharị na uru niile nke mkpakọ ihe na njikarịcha - gịnị kpatara o ji dị oke egwu, njirimara usoro okike, na usoro nke njikarịcha onyonyo.